2019 MYANMAR LGBTIQAs COMMUNITY AWARD ဆုရှင်များကြေညာခြင်း – CAN-Myanmar
Myanmar LGBTIQAs Community Award ကို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ လိင်ဝိသေသ၊လိင်စိတ်ခံယူမှုကွဲပြားသူများအခွင့်အရေးများ ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် နည်းလမ်းစုံဖြင့် ရွပ်ရွပ်ချွံချွံ ရှေးတန်းမှနေ၍ ဆောင်ရွက်ပေးနေကြသော မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ လိင်ဝိသေသ၊လိင်စိတ်ခံယူမှုကွဲပြားသူများ၊ ၎င်း တို့၏ မိဘ၊ညီအကိုမောင်နှမများနှင့် မိတ်ဆွေများအား ဂုဏ်ပြုချိီးမြှင့်ရန် ရည်ရွယ်၍ ၂၀၁၈ခုနှစ်မှစတင်ပြုလုပ်ပေးအပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ယခုနှစ်ပြုလုပ်ကျင်းပသော ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွက် Myanmar LGBTIQAs Community Award ဆုရှင်များမှာ
(1) Outstanding Parent of LGBTIQAs of the year Award
လိင်စိတ်ကွဲပြားသူ၏ မိဘအထူးဂုဏ်ပြုဆု –
Myanmar MSM & TGW Network, Myanmar Youth Stars Network, CAN-Myanmar
(2) Outstanding Friend Ally of LGBTIQAs of the year Award
လိင်စိတ်ကွဲပြားသူများ၏ ဆွေသဟာ အထူးဂုဏ်ပြုဆု – ဒေါက်တာ ဥမ္မာအောင်
အဆိုပြုတင်သွင်းသောအဖွဲ့အစည်းများ – CAN-Myanmar
(3) Outstanding LGBTIQAs Activist of the year Award
လိင်စိတ်ကွဲပြားသူများအရေး စွမ်းဆောင်ရည်ချွန်ဆု – ကို မိုး (ချယ်ရီမြေမှတွဲလက်များ LGBTI အဖွဲ့ တောင်ကြီး)
Sein Lan Myay (Non Profit Organization), CAN-Myanmar
(4) Honorarium Lifetime Award for LGBTIQAs movement in Myanmar
မြန်မာနိုင်ငံလိင်စိတ်ကွဲပြားသူများအရေးစွမ်းဆောင်ရည်ချွန် တစ်သက်တာဂုဏ်ပြုဆု နှင့်
(5) Award for Memorable Person in Myanmar LGBTQIA’s Activisms
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း LGBTIQAs နှင့်ဆက်စပ်သည့်အရေးများ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည့် ကွယ်လွန်ပြီးသော ပုဂ္ဂိုလ်အား အောက်မေ့သတိရ ဂုဏ်ပြုဆု တို့ဖြစ်ပါသည်။
ယခုနှစ်ဆုစိစစ်ရွေးချယ်ရေး ကော်မတီ၀င်များ စာရင်း
1. Saw Zin Maung Soe, Founder/Chairperson of the Board of Consultants, C.A.N-MYANMAR (Chairperson)
2. Naw Ya Ya Aye Myat, Founder, National Transgender People Alliance of Myanmar (Vice-Chairperson)
3. U Aung Zaw Htun, Founder/Program Manager, TRY CBO (Member)
4. U Cho Ko Naing, Founder, Burmese Tomboys Group (Member)
5. Daw Su Su Hlaing, Founder, Bright Pride Myanmar Lesbians Organization (Member)
6. U Soe Lin Maung, Chairperson Myanmar MSM & Transgender Network (Member)
7. U Tin Ko Ko, Founder/ Program Manager Kings & Queens Organization (Member)
8. U Chit Ko Ko, Founder Lotus Organization (Member) – Outstanding LGBTQIA Activist of the year Awardee for 2017
9. Daw Sue Sha Shin Thant, Founder & Advisor , Space Organization (Member) – Outstanding LGBTQIA Activist of the year Awardee for 2018
10. Ko Moe Aung, Central Board Member Myanmar LGBT Rights Network (Member) – Hero Awardee of 2019
11. Ko Aung Phyu Htut, Executive Committee Member, Myanmar Youth Stars Network (Member)
12. Daw Khine Zar Thwe, Development Coordinator, Rainbow Alliance – LGBT+ Youths Empowerment Program (Member)
13. Daw Myat Noe Phyu, Independent Activist (Member) – Outstanding Friend Ally of LGBTQIA of the year Awardee for 2017
14. U Phyo Thit Luu, Independent Activist
15. Daw Nyan Nyan, Independent Activist (Member)
16. Dr. Pyae Sone Hein , Executive Director, C.A.N-MYANMAR – General Secretary
17. U Kaung Zaw Htet, Program Director, C.A.N-MYANMAR – Secretary (1)
18. Daw Zar Zar Oo, Finance & Operations Manager, C.A.N-MYANMAR – Secretary (2)
19. U Min Thant Tin, Program Assistant Officer, C.A.N-MYANMAR – Secretary (3)
( The Secretary team members are not concerned with voting processes, and will only perform in administration and operation.)